परिश्रमी महिला, जस्ले अटो चलाएर जिविका चलाउदैछन् - Pradesh Dainik
परिश्रमी महिला, जस्ले अटो चलाएर जिविका चलाउदैछन्
शनिबार, फागुन २२, २०७७ , प्रदेश दैनिक
पथरी, रीता पाण्डे बिहान उज्यालो नहुँदै घरको काम सक्छिन् । घरका सबै काम सकेर अटो लिएर बजार निस्कने उनको दैनिकी नै छ । मोरङको पथरी शनिश्चरे ९ महेन्द्र चौकमा सानो घर छ रीता को । श्रीमान शिवु पाण्डे ५ वर्ष देखि बैदेशिक रोजगारिमा मलेसियामा परिश्रम गरिरहेका छन् । श्रीमान्को परिश्रमले मात्रै नहुने ठानेपछि रीताले अटो किन्ने सोच बनाइन् र ३ वर्ष अघिदेखि पथरी बजार र आसपासका शनिश्चरे, हसन्दह, कानेपोखरी, मंगलबारे, आइतबारे लगायतका ठाउँमा अटो दौडाउन थालिन । घरमा ६ वर्षकी छोरी छिन् । छोरीलाई पढाउने र घरखर्च चलाउने रकम आफै जोहो गर्न थालेको रीता बताउछिन् ।
छोरी नजिकैको बोर्डिङ स्कुलमा युकेजीमा पढाउदैछिन् रिता । श्रीमान्ले विदेशमा कमाउने र घरमा बिनाकाम बस्नु भन्दा आफ्नो कमाइ गर्नुपर्ने सोचले अटो चलाउन थालेको रीता बताउछिन् । पाण्डे परिवारको आर्थिक अवस्था पनि कम्जोर नै छ । १२ धुर जग्गामा बनेको घर छ । रीताका श्रीमान् मलेसियामा फर्निचरमा पसिना बगाउदैछन् यता रीताले अटो चलाएरै घरखर्च टार्दैछिन् ।
कहिलेकाँही सफारी चलाउन पनि जोखिम हुने रीताको अनुभव छ । अलिक पाका आमाहरु चड्दा लडाउने पो हो की भनेर डराउने गर्नुहुन्छ रीता सुनाउछिन् कहिलेकाँही फटाहा केटाहरु, रक्सीले लठिएकाहरु चड्छन्, पैसा तिर्दैनन् माग्न पनि डरै लाग्छ तर म खुसी नै छु श्रीमान् श्रीमती दुवैजना कमाउने छौँ ।
अटो चालक रीता मात्रै हैन पथरी बजारमा सीता रसाइलीको पनि उस्तै कथा छ । पथरी शनिश्चरे १० नं. घर बताउने सीताले अटो चलाएको २ वर्ष भयो रे । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अरु महिलाले अटो चलाएको देखेपछि हौसिएकी सीताको अहिले राम्रै कमाइ छ । सुरुमा घरमै कुखुरा पालन लगायतका समान्य काम गरेर १ लाख २० हजार भेला पारेकी सीताले लोनमा अटो निकालेको सुनाउछिन् ।
४ वर्षे किस्ताको अझै २ वर्ष बाँकी नै छ तर कमाइ पनि राम्रै छ । लोन तिरेर घरखर्च, छोराछोरी पढाउन पु¥याउछु सीताले सुनाइन् छोरो अहिले आयल्स पढ्न काठमाडौंमा छ छोरी यहि बोर्डिङ स्कुलमा ९ कक्षामा पढ्दै छे । पहिले पहिले त ५०/६० हजार नै हुन्थ्यो तर अहिले पनि ३०÷४० हजार त हुन्छ सीताले सुनाइन् । सीताको अनुभवमा अहिलेसम्म खासै गाह्रो छैन् । कहिलेकाँही दुर्घटना हुन्छ की भन्ने डर हुन्छ । हामी महिलाहरु सबै एकजुट छौँ, एउटै परिवार जस्तो छ, लोन तिर्ने पैसा नहुँदा पालो पालो गरेर सरसहयोग गरेर तिर्छौँ ।
सीताका श्रीमानले छाडेको ४ वर्ष भएछ । १०/१२ धुर जग्गा र एउटा मिनिघर छोराछोरी, घरव्यवहार सीताले आफैले धानेकी रहिछन् । श्रीमान् अर्की लिएर हिडे, कता गए थाहा छैन्, डिभोर्स माग्दा महिले दिइन–सीताले सुनाइन् । यतिधेरै मेहनत गर्ने श्रीमती छाडेर हिड्ने श्रीमान पनि खै कस्ता हुन् ?
पथरी बजार पहिलो अटो चालक हुन कौशीला अधिकारी । अधिकारीले ५ वर्ष अघिदेखि सफारी, अटो चलाउदैँ आएकी छिन् । पथरी शनिश्चरे ९ मा अधिकारी दम्पतीको घर छ । पहिले कौशीलाले मात्रै अटो चलाउथिन रे, अहिले अधिकारी दम्पती नै अटो चलाउछन् ।
अधिकारी दम्पतीले अटो चलाउनु पहिला दुःखले घरखर्च चलाउथे रे तर अहिले ५ जनाको परिवार पालेर बचत पनि गर्ने गरेका छन् । अरु महिलाहरुले सफारी चलाएको सुनेपछि आफुपनि चलाउन सक्छु भनेर सुरु गरेको कौशीलाले सुनाइन् । सुरु सुरुमा त महिनाको ८०/९० हजार नै कमाउने गरेको अधिकारीले सुनाइन् । अहिलेपनि २ जनाले मासिक ७० हजार कमाइ गर्ने गरेका छन् । आफु गुनाको अरुले व्यवहार गर्ने कौशीला बताउछिन् । अहिलेसम्म सबैले राम्रै व्यवहार गरेका छन्, बरु अझै यात्रुहरुले हौसला दिन्छन्, महिलाले पनि अटो चलाउनु हुँदो रहेछ भन्छन्–कोशीलाले सुनाइन् । महिलाहरु पनि केही गर्न सक्छन्, सबै महिलाले अफुले सकेको काम गरे राम्रै आम्दानी गर्न सकिने सुझाव कौशीलाको छ ।
पथरी बजारका यी महिलाहरु त उदाहरणका पात्र मात्रै हुन् । नगरमा ५ जना यस्तै सफारी चालकहरु रहेको उनिहरु बताउछन् । केही नगरी समय बिताउनु भन्दा काम गरेर आम्दानी गरेकै बेस । यी परिश्रमी महिलाहरुका जाँगरबाट अरुले पनि राम्रै पाठ सिक्न सकिन्छ ।